Al Jazeera oo wareysatay Ra’iisalwasaaraha Soomaaliya – idalenews.com
Al Jazeera oo wareysatay Ra’iisalwasaaraha Soomaaliya
R/wasaaraha Soomaaliya C/wali Sh, Axmed oo la hadlay Tv,ga Aljazeera qeybta luuqada English,ka ayaa waxaa uu ka hadlay xaalada dalka taagan ee uu ugu horeeyo dagaalka ay dawlada Soomaaliya kula jirto Xarakadda Al-Shabab.
R/ wasaaraha oo wax laga waydiiyay dagaalka ay dawlada Al-Shabab kula jirto Xarakadda iyo Xilliga ay soo gabo gabaynayso ayaa waxaa uu sheegay in muddo bil ah ayciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM Al-ka saareen illaa 9 magaalo oo muhiim ah sida uu yiri waxaana uu intaa ku daray in dagaalka ay sii wadayaan tan inta ay gacanta dawlada soo galayaan magaalooyinka ay hadda Shabab maamulaan.
C/wali Sh, Axmed Max’ed waxaa uu sidoo kale sheegay in magaalooyinka laga saaray Al-Shabab ay ahaayeen magaalooyin ay dhalinyarada ku tababari jireen ama uu kasoo gali jiray dhaqaalo ay dagaalka ku huriyaan sida uu yiri.
Mar R/wasaaraha wax laga waydiiyay waxa dawlada uga qorsheysan maadaama ay Al-Shabab dib u qabsadeen magaalooyin ay ciidamada dawladu ka gudbeen magaalooyinka qaarna ay cuna qabateyn saareen sida Xudur oo kale ayaa waxaa uu sheegay in dawladu wado qorshe ay Al-Shabab kula dagaalamayso dhulka miyiga ah si ay u u suurto gasho in magaalooyinka wadooyinka u furmaan.
Al-Shabab ayuu R/wasaaruhu ku eedeeyay inay dhibaato ka geysteen magaalooyinka laga qabsaday tusaale degmada Ceel-buur ee G/Gaduud ayuu sheegay inay aaseen ceelashii dadku biyaha ka cabayeen taasoo dhibaato ku ah dadka rayidka ah.
“Al-Shabab kuma jiri karaan dhulka hawdka ah waayo uguma noolaan karaan sida ay ugu noolaayeen magaalooyinka waa weyn oo kale go’doominta magaalooyinka qaar ay saareena waa mid waqti kooban qaadan doonta “ayuu yiri R/wasaaruhu.
Mar uu ka jawaabayay su’aal la xariirtay qorshaha dawlada ee gar gaar gaarsiinta dadka dagaalka ku barakacay iyo maamul u sameynta degaanada gacanta Al-Shabab ka baxay ayaa waxaa uu xusay in tilaabada ugu horeysa ee ay qaadayaan ay tahay in dadka la gar gaaro dhawaana ay gaadiidka sida shixnado gar gaar ah ay dirayaan degmada Qoryooley ee G/Sh/hoose oo dhawaan ay dawlada qabsatay sidoo kalena xubno wasiiro ah oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ay tagi doonaan degmooyinka dalka qaarkood kuwaasoo ka shaqeyn doona maamul u sameynta meelaha Shababka laga saaro intii karaankooda ah sida uu R/wasaaruhu yiri.
Maadaama aad Al-Shabab aad ka qabsateen dhawr magaalo dhanka kale waxay weerar ka geysteen magaalada Muqdisho oo laga xusi karo madaxtooyadda, garoonka diyaaradaha iyo kolonyo ay Q,M leedahay soo lama dhihi karo amaanka caasimada ayay qal qal galinayaan, ayaa la weydiiyay R/wasaaraha waxaa uu uga jawaabay in dhacdooyinka Muqdisho ka dhacaya ay dunnida oo dhan ka dhacaan hase ahaatee ay fashiliyeen dhawr weerar xubno badan oo weeraro kale maleegayayna ay qabteen.
Inay suurto gal tahay wada hadal ay la galaan Al-Shabab oo R/wasaaraha la weydiiyay ayaa waxaa uu sheegay inay haddaba jiraan ergo iyo fariimo ay direen xubno uu ku tilmaamay inaysan xag jir aheyn oo Al-Shabab ka tirsan natiijadana ay sugayaan kuwa qaatay fikirka Al-Qacidana aysan diyaar u aheyn inay la hadlaan.
R/wasaare C/wali Shiikh oo ka hadlay arrinta ku saabsan in dawlada hubka ay hesho uu gacanta u galo Al-Shabab isla markaana uu dayacayanyahay hubka dawlada ayaa waxaa tilmaamay in eedeynta ka timid guddiga dabagalka cuna qabataynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea ay tahay mid aan dawlada waxba laga weydiin shaqsi ahaantiisana uusan ka war qabin hub dawladu leedahay oo Al-Shabab u gudba.
Qorshaha dawlada ee mustaqbalka soo socda mar uu ka hadlay R/wsaaruhu waxaa uu xusay inay wadaan qorshe dib loogu habaynayo ciidamada dawlada si ay u suurto gasho in dawladu isku filnaansho dhanka ciidamada ah u gaarto.
Daawo:- Barlamanka dalka ingiriiska oo u codeeyey in qaadka laga joojiyo dalka ingiriiska.
Xaflad lagu taageeraayo Dowlada Koonfur Galbeed oo ka dhacday Alberta Canada + sawiro